Ku saabsan - Telling the Real Story
Soo Bandhigida Xaqiiqada waa mashruuc ku saabsan tahriibka ay soo mareen qaxootiga Soomaalida, Eritrean iyo Nigerian si ay u soo galaan Yurub.
Sanado badan ayaa qaxootiga iyo soo galootiga Soomaalida, Eritreanka iyo Nigerian waxay Yurub u soo marayeen badda dhexe. Qaar badan ayaa noloshooda ku waayay tahriibka halka kuwii soo badbaaday ay la dhibaateysan yihiin tacadiyadii ay la kulmeen. Waxaa jira dhowr sababood oo ku kalifay in ay soo tahriibaan: Qaar badan waxay ka soo carareen cadaadis, dagaal, ama qilaafaad. Qaar kale waxay ka soo carareen gaajo ama xaalada wadankooda oo sii xumaatay ama wadamada ay ku noolaayeen. Qaar kale waxaa soo jiitay been-abuurka muqalasiinta iyo sawirada ay ku arkaan internetka iyo in ay raacaan wadadii ay mareen asxaabtooda.
Inkastoo qaar ay la socdaan khataraha tahriibka ayaysan qaar badan oo ka mid ah qaxootiga si fiican u fahansaneyn dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay kala kulmi karaan tahriibka. Waxay sidoo kale Yurub ka aaminsanyihiin fikrado qaldan iyaga oo aan la socon sharciyada qaxootiga ee Yurub.
Mashruuca Soo Bandhigida Xaqiiqada waxa uu soo bandhigayaa qisooyin dhabta ah ee qaxootiga iyo soo galootiga soo tahriibay. Waxay la hadlayaan bulshadooda iyaga oo ka waramaya waxyaabihii ay la soo kulmeen kuwa fiican iyo kuwa xun. Qisooyinkaan waxay ka saacidayaan qofka doonaya in uu soo tahriibo in uu helo macluumaad ku saabsan khataraha tahriibka si ay u gaaraan go’aan wax ku ool ah oo ay isugu diyaariyaan khataraha ay la kulmi karaan.
Mashruuca Soo Bandhigida Xaqiiqada waxay UNHCR ka saacidaysaa Soomaalida, Nigerian iyo Eritreanka geesiyiinta ah in ay afkooda ugu soo bandhigaan dhamaan kuwa dhagaysanaya qisooyinkooda. Xuquuqda in qofku uu magangalyo dalbado waa mid caalami ah, oo qofna lagama hor-istaagi karo in uu xuquuqdiisa helo. Balse go’aanka in qofku uu bilaabo tahriibka dheer ee Yurub waa mid nolosha si weyn u saameynaya – keliya ma saameynayo qofka tahriibaya balse xitaa qoykiisa, sidaa darteed waa muhiim in go’aanka lagu saleeyo macluumaad dhamaystiran. Nidaamka, oo ay suurtagelisay taageerada maaliyadeed ee laga helayo Guddiga Yurub iyo UNHCR waxay taageereysaa geesiyaasha reer Ereteriya, dadka Nigeria iyo Somalida badbaaday si ay uga sheekeeyaan sheekadooda iyo qof kasta oo raba inuu dhageysto.
Xaqa aad u leedahay magangelyo waa xuquuq aadamiga aasaasiga ah. Marka ma jiro cid u baahan ilaalin caalami ah oo laga horjoogsan karo inay sidaas sameeyaan. Go'aanka ah safarka dheer ee khatarta ah ee Yurub wuxuu beddelaa nolosha - maahan safarka kaliya laakiin qoyskooda oo dhan. Sidaa darteed waa in lagu saleeyaa macluumaad dhammaystiran.
Ku Saabsan UNHCR
Xafiiska Hay'adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay - UNHCR - waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo iskuna dubbarido ficillada caalamiga ah si loo ilaaliyo qaxootiga loona xalliyo dhibaatooyinka qaxootiga adduunka oo dhan..
Ujeeddada koowaad ee UNHCR waa in la dhowro xuquuqda iyo wanaagga qaxootiga. Hay'addu waxay ku dadaaleysaa inay hubiso in qof walba uu isticmaali karo xaquuqda uu ku dalban karo magangelyo oo uu ku helo magangal aamin ah Gobol kale, iyada oo ikhtiyaar u ah inuu ku laabto guriga si ikhtiyaar ah, u dhexgalo gudaha ama dib u dejin waddan saddexaad. Waxay kaloo leedahay amar ah inay caawiso dadka bilaa hoyga ah.